Umenzi waseChina okruqulayo kunye noMthengisi | IHanrui
Ilungu elinye nelinye elivela kwiqela lethu elinengeniso enkulu lixabisa iimfuno zabathengi kunye nonxibelelwano lwenkampani. Siyakwazi ukwenza oko kulungiselelwe wena ukuze uzalisekise okwonelisayo! Umbutho wethu umisela amasebe aliqela, kubandakanya isebe lezemveliso, isebe lentengiso, isebe lolawulo oluphezulu kunye neziko lokulungisa, njl.
Udonga lwangaphakathi likhonkco elibalulekileyo lokuphucula umgangatho wombhobho ngaphambi kokuqhubekiswa kombhobho. Logama nje isetyenziselwa ukuqhubekekisa udonga lwangaphakathi kumbhobho we-titanium alloy kunye nombhobho wesinyithi onqabileyo, idlala inkqubo ebalulekileyo yekhonkco yombhobho ogqityiweyo kunye nombhobho ogqityiweyo. Umzi mveliso wethu ikakhulu ubonelela ngenguqu yezixhobo ezingekho semgangathweni zomatshini okruqulayo, intloko ekruqulayo kunye nesiphatho sesixhobo kunye nomatshini okruqulayo ukusombulula ingxaki iimfuno zabathengi zomgangatho wodonga lwangaphakathi lwemibhobho eyahlukeneyo lubonelela abathengi ekhaya nakumazwe aphesheya nge izixhobo ezikudidi oluphezulu kunye nozinzo ukuphucula ukusebenza kwemveliso.
Egqithileyo Umatshini wokucoca iTafile-Umatshini wokucoca, izixhobo zokucoca ezisetyenziswa kumashishini ahlukeneyo zinokwahlulahlulwa zibe luhlobo lwediski, uhlobo lwebhanti kunye nohlobo lweplate- IHanrui
Okulandelayo: Isiguquli somoya
Umatshini oMdaka oqhelekileyo
Umatshini weSilinda odinayo
Umatshini Wokudinwa Kwinjini
Horizontal Umatshini ekruqulayo
Umatshini weJig Boring
Umatshini wokudinwa komgca
Umatshini oPhathekayo oDinayo
Itonela Umatshini okruqulayo
Nkqo uyadika Machine